यस्तो रैछ ज्ञानेन्द्र शाहीको आम्दानीको श्रोत, खुलाए आफैले ! – ताजा समाचार
यस्तो रैछ ज्ञानेन्द्र शाहीको आम्दानीको श्रोत, खुलाए आफैले !
आफुलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता दावी गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीले आफु ब्यापारी भएको खुलासा गरेका छन् । अभियानका नाममा देश विदेश घुम्ने र महंगा होटलमा बस्ने शाहीको आम्दानीको श्रोत खोजिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेलामा उनले आफु ब्यापारी भएको बताएका छन् । सोमबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । नेपालगन्ज विमानस्थलमा भएको घ टना र आम्दानीको श्रोत बारे गरिएको प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा शाहीसंगै पराष्ट्रिय युवासंघ नेपालका सचिव बचन सिंह सहभागी थिए । दुई जनाबीच कार्यक्रममा चर्काचर्की समेत भएको छ । शाहीले र्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले झुट बोलेको दावी गरेका छन् । उनले विमानस्थलमा पर्यटन मन्त्रीलाई विमान ढिलाई गरेको बारे प्रश्न सोध्दा त्यहाँ कसैले पूर्वयुवराज पारस शाहको नाम कसैले नलिएको दावी फेरी गरेका छन् । उनले फेरी यस्तो दावी दोहोर्याएका छन् । कार्यक्रमा शाही र राष्ट्रिय युवासंघ नेपालका सचिव बचन सिंहबीच चर्काचर्की भएको थियो ।
उनले अहिले सम्मको अभियानको कार्यक्रम ब्यक्तिगत रुपमा गरेको बताए । मैले ब्यक्तिगत रुपमा आफैले खर्च गरिहरेको छु, उनले भने ज्ञानेन्द्र शाही खुदै आफ्नो लगानी आफै गरेको छ । ‘ज्ञानेन्द्र शाही मार्केट अफ प्राइभेट लिमिटेड’ भन्ने कम्पनी छ । उनले रजिष्टार कार्यालयमा गएर बुझ्न दावी दिए । उनले आम्दानीका आधारमा ट्याक्स समेत तिरेको बताएका छन् । उनलाई ब्यापारीका बारेमा, ट्याक्स नतिर्ने ब्यवसायी र मर्कामा परेका ब्यवसायीका बारेमा बोल्न सिंहले सुझाव दिए । उनले आफु नेता नभएको र आफुले कहिल्यै नेता नभनेको बताए । शाहीले आफुले जनतालाई कहिल्यै भ्रम सिर्जना नगरेको दावी गरे । नेपालगन्जवाट आउने जहाजको टिकट भिमवहादुर शाहीले तिरेको बताए ।